]Kachasị mma USB Tester Supplier na China | Noyafa
NOYAFA Eletrọnịkị ọkachamara na ngwa nnwale na ndị na-anwale eriri ruo afọ iri na ise
Multifunction USB Tester
Ihe nlebanya igwe LCd
Ihe nleba anya ogologo eriri USB
Ihe nlebanya eriri netwọkụ
Ihe nleba anya na-aga n'ihu USB
Ihe nleba anya USB Rj11 Rj45
Onye na-achọpụta eriri USB
Ebe nchọta waya n'okpuru ala
Ihe nchọpụta waya n'okpuru ala
Ngwa Fiber Optic
Igwe ọkụ anya
Multimeter Optical Fiber
Ihe nlebanya Cctv
Onye nyocha igwefoto Ipc
Igwe anya Laser
Ngwa eji atụ
Ihe onyonyo thermal
Ihe nchọpụta ihe mgbochi ọkpọkọ
Ihe nyocha Wall Stud
Ihe nchọpụta voltaji na-abụghị kọntaktị
Atụ Mpaghara Anya
Igwe ala GPS
Igwe iku ume
Ọkachamara wiring gị ghọtara ihe ị chọrọ
Shenzhen Noyafa Electronic Co., Ltd bụ ọkachamara na ule ngwá na USB testers maka 15 afọ.
nwere ahụmịhe ODM / OEM bara ụba maka ọtụtụ ụdị ama ama sitere na ụwa niile!
Anyị isi ngwaahịa: Waya Tracker, LCD cable tester, USB ogologo tester, CCTV monitor tester, Underground waya locator, Laser nso Finder na ndị ọzọ ule ngwaọrụ.
]Kasị mma NOYAFA multifunction LCD cable tester FactoryPrice-NOYAFA
]NF-868 Akụkụ:1. Nwale mepere emepe, mkpụmkpụ, obe, njikọ azụ na idobe waya gbajiri.2. Nwere ike tụọ ogologo eriri netwọk, eriri coaxial, eriri ekwentị na eriri USB.3. Ka ịchọta waya ma ọ bụ eriri e lekwasịrị anya ngwa ngwa n'etiti ụdị waya.4. Mgbochi mgbochi mgbe ị na-achọ eriri USB na Exchanger ma ọ bụ rawụta. 5. Ụdị nyocha abụọ: mgba ọkụ nkịtị / PoE. 6. Ọrụ nke nchekwa na ebe nchekwa maka data nhazigharị.7. Mgbanyụ ọkụ na-egbu oge na-akpaghị aka na ọrụ ọkụ azụ.
]NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M maka eriri eriri
]NOYAFA Network Cable Tester NF-8108M maka lan cableOverviewNF-8108M bụ onye na-achọpụta eriri netwọk, nke mejupụtara tester (NF-8108), na 8pcs remote identifier.Ọ nwere ike ịlele njehie wiring maka STP / UTP, tụọ ogologo maka lan USB ziri ezi. .Ọ bụ n'ọtụtụ ebe ọdabara na kọmputa netwọk na ndị ọzọ ubi.
]Noyafa n'okpuruala mfe ọrụ Multi ọrụ NF-820 cable chọta
]Isi njirimara: ● Chọpụta ebe eriri USB dị n'okpuru ala ma ọ bụ ụ USB ọzọ anaghị ahụ anya, oke ya bụ 0-2m. ● Mmetụta mgbaama maka nnyefe na nnata bụ mgbanwe. (0-2m) ● Ọ dị mfe soro ya na njụta ​​nnyonye anya AC zuru ezu ● ụda trace live cable (＜220V）) nwere oghere na-ezere ọkụ ọkụ. ● eriri trace nwere ike, dị ka otu conductors, 2-core ma ọ bụ multi-core cable. Uru: ● Igwe ntị na-enyere aka ịrụ ọrụ na gburugburu mkpọtụ. ● Enwere ike iji eriri USB na oghere n'otu oge. ● Ọrụ njirimara batrị dị ala. ● batrị Lithium enwere ike ịgbanye maka nnyefe.
]NOYAFA NF-8209 LCD Ngosipụta Ogologo Ogologo Lan Cable POE Wire Checker Cat5 Cat6 Lan Test Network Tool Scan Cable Wiremap Tester
]Nkọwa ngwaahịa:NF-8209 bụ ọgbọ ọhụrụ na-enye akara ngosi dijitalụ na analog niile n'otu toner na nyocha netwọkụ. Ọ nwere ụdịdị atọ maka nhọrọ iji soro eriri USB dị ka ọnọdụ dijitalụ, ọnọdụ analog na ọnọdụ PoE. Nke ahụ pụtara na ejirila teknụzụ ọnọdụ ikuku kacha ike maka ebe ọrụ ọ bụla. Ọzọkwa, ọ na-agụnye nha ogologo eriri USB, ule mmejọ USB, ule PoE, hub blink na ọrụ NCV, ihe ndị a niile na-eme ka ọ bụrụ ngwa ọrụ maka ndị injinia cabling. Ọrụ ngwaahịa1. CONT-- Nwale emeghe, mkpụmkpụ, cross,ect maka STP, UTP cable.2. Ogologo - tụọ ogologo lan cable, oke bụ 2.5m ~ 200m.3. Nyochaa--Analog/Digital/PoE mode ka ịchọta eriri lan.4. PoE-- dị maka ọkọlọtọ ma ọ bụ na-abụghị ọkọlọtọ PoE mgbanwe (5 ~ 60V), chọpụta AT ma ọ bụ AF ọkọlọtọ nke PSE ụdị. 5. Flash--locate network port by the flashing port light on switch/ router.Package Include: Transmitter 1pc ( battery is not include ) Receiver 1pc Remote 1pc Earphone 1pcCable adaptors 1 setCarry bag 1pcUser manual 1pc Quality certificate 1pc
Ọ bụrụ na ịgaghị ahụ ngwaahịa ọ bụla dabara adaba maka ọrụ gị, nwaa enyemaka ọrụ nhazi ahaziri nke NOYAFA.
Noyafa nwere ọkachamara R&D ngalaba nke gụnyere software& ndị injinia ngwaike, ndị injinia ebu. ya mere, ODM& A nabatara ọrụ OEM maka anyị. N'ozuzu, ndị ahịa ga-achọ ịhazi Logo nke ha na ihuenyo ihe ma ọ bụ akara, igbe agba, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ, ma ọ bụ katọn.
Maka ụfọdụ ndị ahịa, ha ka kwesịrị ịhazi asụsụ dị iche iche n'ime ngwaọrụ, dị ka Germany, Polish, Russian, Turkish, Korean, wdg. ndị injinia software anyị nwere ike ịmegharị ma na-enye ọtụtụ asụsụ maka ndị ahịa. Dị ka onye na-emepụta eriri USB, onye na-anwale eriri noyafa, jiri ngwaahịa dị mma merie ntụkwasị obi ndị ahịa.
Nabata iwu OEM na ODM nwere ọkachamara R& D otu na mgbe-ahịa otu ọrụ.
Ọnụ ego njikwa, agaghị agafe mmefu ego, na-eme ka ngwaahịa dịkwuo asọmpi n'ahịa.
Ngwaahịa ọ bụla anyị na-emepụta agafeela nyocha nke ọma, gboo mkpa.
Mpaghara mmepụta ihe nke onwe
Anyị "usoro Noa" ulo oru mpaghara nwere ihe karịrị 20000 square mita.
]Ị bụghị ụbụrụ gị
]Emepụtara ha niile dịka ụkpụrụ mba ụwa siri sie ike. Ngwaahịa anyị enwetala ihu ọma site n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ha na-ebupụ ugbu a n'ọtụtụ ebe na mba 200.
SHENZHEN NOYAFA TECHNOLOGY CO., LIMITED bụ onye na-emepụta ngwá ọrụ nnwale maka ubi cabling na Shenzhen, China.
Anyị pụrụ iche na nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke nkwurịta okwu netwọk ule, integrated wiring na instrumentation ngwaahịa.The isi ngwaahịa bụ waya tracker, LCD cable tester, USB ogologo tester, CCTV monitor tester, POE checker, Underground waya locator, Laser nso. onye nchọta na ngwaọrụ nnwale ndị ọzọ.
Mgbe afọ 15 nke mmepe gasịrị, anyị emepụtala ahụmahụ bara ụba na ahịa na otu ndị na-ere ahịa. Ndị na-emepụta ihe na ndị ọrụ na nhazi nke aha ọma dị elu. Ka ọ dị ugbu a, a na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile, karịsịa na Europe, Asia. Ebe ọ bụla ma ọ bụ mgbe ọ bụla, afọ ndị ahịa na-eju afọ bụ nchụso na ebumnuche anyị ebighi ebi.
Ugbu a, A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ụwa niile, karịsịa na Europe, Asia. N'agbanyeghị ebe ma ọ bụ mgbe, afọ ojuju ndị ahịa bụ nchụso na ihe mgbaru ọsọ anyị ebighị ebi.
]Noyafa a na-eme ogologo & ọma nkwado na Prokit's Industries Co., LTD kemgbe 2012. Kwa afọ ahịa bụ 500 nde USD, tumadi ọnọ cable tester, waya cable locator na n'okpuruala waya tracker.AmazonAmazon bụ otu n'ime mkpa mmekọ nke Noyafa. Anyị nwere ọtụtụ ndị na-ekesa Amazon. Usoro ngwaahịa gụnyere ebe nchọta waya n'okpuru ala, onye na-anwale eriri USB, onye na-enyocha USB PoE, onye na-achọpụta waya, ebe nchekwa laser. Top ere bụ NF-8209, NF-8601S na NF-488, kwa afọ ahịa nwere ike iru 6 nde USD kwa afọ.Mobile Tele Systems (MTS) Anyị guzosie ike ogologo & ọma imekọ ihe ọnụ na Mobile Tele Systems na Russia kemgbe 2013. Anyị tumadi ọnọ. TDR lan cable tester, network wire locator, underground wire detector etc. RBS Telecom (RBS) Ndị ahịa anyị na-ekpuchi akụkụ niile nke ụwa, Anyị na RBS Telecom na Israel na-emekọ ihe ogologo & ọma na Israel maka 5years, tumadi ọkọnọ cable tester, waya cable locator. na n'okpuruala waya tracker.
]Vidiyo mmeghe maka eriri USB Noyafa multi function tester NF-8601W Vidiyo na-anwale vidiyo sitere n'aka ndị ahịa anyị
]Dị ka otu n'ime ndị kasị ere n'etiti dum ngwaahịa nso. NF-8601W na-emeri ọtụtụ ndị fan si n'akụkụ ụwa niile maka ojiji ọ bara uru, ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa yana ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya. Ọ nwere ike ịnwale ịdịgide eriri USB, ogologo eriri USB, ọnọdụ USB, nwalee PoE na PING. Na 8 remotes nwere ike ịnwale eriri 8 otu oge wee nyere gị aka melite arụmọrụ ọrụ. Iji meziwanye àgwà ngwaahịa anyị, Noyafa na-agbalị mgbe niile ka ọ kacha mma ịnakọta ngwaahịa inf na ihe ndị ahịa chọrọ n'aka ndị ahịa gburugburu ụwa, site na nkwado ha, anyị nwere ike ịnọgide na-aga n'ihu.
Ọ BỤRỤ na Ị nwere ajụjụ, detara anyị akwụkwọ ozi
Naanị gwa anyị ihe ị chọrọ, anyị nwere ike ime karịa ka ị chere.
Nwebiisinka © 2022 SHENZHEN NOYAFA ELECTRONIC CO., LIMITED - www.noyafa.net Ikike niile echekwabara.